July 9, 2019 - ThutaSone
July 9, 2019 ThutaSone 0
ဘယ်မှာလဲတော့မသိဘူတရားစခန်းဝင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာဆိုတဲ့ နှင်းနုရဲ့ဖခင် နေပြည်တော်၊ဇူလိုင်လ(၉)ရက်။နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားကလေးငယ်လေးရဲ ့အမှုနဲ ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ မနှင်းနုကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာဟာ ဖြစ်စဉ်အစကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဆရာမ မနှင်းနု ပျောက်သွားပြီ၊ထွက်ပြေးသွားပြီ လို ့ဆိုကာ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်ရောက်နေတယ် ၊ဘာလုုပ်နေတယ်ဆိုတာ […]
ဆရာလေးတွေကို အကြွေး သိန်း(၂၀)အား (၁၀) တိုး ပေးနေရသောကြောင့် အလှူခံခိုင်းနေရဟုဆို
အကြွေး သိန်း(၂၀)အား (၁၀) တိုး ပေးနေရသောကြောင့် ဆရာလေးတွေကို အလှူခံခိုင်းနေရဟုဆို (ဂေါ်ပြားနဲ့ အရိုက်ခံရတဲ့ သီလရှင်လေးများရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း) ဇူလိုင် ၉၊ အွန်လိုင်းပေါ် သတင်းထွက်ပေါ်လာသော ရွှေနှင်းဆီ သီလရှင်ကျောင်းမှ (၁၀)နှစ်အောက် သီလရှင် (ဆရာလေး) တွေ နှင့် ပတ်သတ်၍ ၂၀၁၉ […]
Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမဖြစ်သူ သီရိမေGroup Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရ
Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမဖြစ်သူ သီရိမေGroup Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရ Wisdom Hill ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဖြေရှင်းနေကြတာကိုစာဖတ်သူတွေသိပြီးသားဖြစ်သလို ကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေဟာလည်း အမှုကိစ္စဖြစ်ကတည်းက အမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့မြင်ရနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်မပေါ်သေးပဲ ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအမှုကိစ္စတွေကြားထဲမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကဲ့သို့ လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သဇင်ထက်ရဲ့သားလေးရဲ့အဖြစ်အားအမေဖြစ်သူမှလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားရင်းနဲ့ ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ […]
ယနေ့(ဇွန်လ ၉ရက်)တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သည့်“သက်ထားသူဇာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၅ ထိမြင့်တက်လာ အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်ရရန် အဆင့်၅ဝကျော်မှ စိတ်ချရမည်ဟု ဆို “
ယနေ့(ဇွန်လ ၉ရက်)တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သည့်“သက်ထားသူဇာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၅ ထိမြင့်တက်လာ အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်ရရန် အဆင့်၅ဝကျော်မှ စိတ်ချရမည်ဟု ဆို “ အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံတကာစီးရီးကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် ချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ခဲ့သော မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကြက်တောင်အားကစားမယ်သက်ထားသူဇာသည် ယနေ့(ဇွန်လ ၉ရက်)တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌ အဆင့်၈၄နေရာအထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ သက်ထားသူဇာသည် ယခင် အဆင့် ၁၀၁ရှိခဲ့ရမှ ၈၄အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း […]
ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကမြန်မာတွေ ဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ တရုတ်ပိုင် ကျောက်ဝိုင်း
ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကမြန်မာတွေ ဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ တရုတ်ပိုင် ကျောက်ဝိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားရှေ့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲက Myanmar Culture Valley ဆိုတဲ့ ကုန်တိုက် မြေအောက်ထပ်မှာ ရှောက်စန်း ဖွင့်ထားတဲ့ တရားမဝင်ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း မြေအောက်ထပ်ဆင်းတဲ့လှေကားတွေကို ဘယ်သူမှ လာလို့မရအောင် ပိတ်လိုက်ကြတယ်။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို တရုတ်ရှောက်စန်းက ပထမထပ် အတင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်။ […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ချိန်နှင့် ငါးများများ စားသုံးခြင်း၏ကျိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ချိန်နှင့် ငါးများများ စားသုံးခြင်း၏ကျိုး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ငါးများများ စားသုံးခြင်းဖြင့် မွေးလာတဲ့ ရင်သွေးလေး ဉာဏ်ကောင်း ထက်မြက်စေပါတယ် ငါးဟင်းကြိုက်တဲ့ မေမေတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပေါ့။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ သန္ဓေသားလေးရဲ့ အမြင်အာရုံနဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာဖို့အတွက် ငါးကရရှိတဲ့ အဆီဓာတ် လိုအပ်ပါသတဲ့။ သုတေသနအဖွဲ့တွေက မိခင်ရဲ့အစားအစာနဲ့ သွေးတွင်းက အဆီဓာတ်ပမာဏရယ်၊ […]
ဘုန်းကြီးပိုက်ဆံ ၂၁ သိန်းကိုအမျိုးသမီးသုံးဦးက ခိုးယူသည့်ဖြစ်စဉ် ဖျာပုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွား
ဘုန်းကြီးပိုက်ဆံ ၂၁ သိန်းကိုအမျိုးသမီးသုံးဦးက ခိုးယူသည့်ဖြစ်စဉ် ဖျာပုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွား ဧရာဝတီတိုင်​း​ဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့၊ သလိပ်​ကြီး​ကျေးရွာ ဘုန်​​း​တော်​ကြီး​ကျောင်​းတိုက် ဆရာတော် ဦးဝါသဝ၏ ပိုက်ဆံ ၂၁ သိန်းကို ခိုးယူခဲ့သည့် အမျိုးသမီး ၃ ဦးနှင်​့ အမျိုးသား ၁ ဦးတို့အား ဖျာပုံမြို့မရဲစခန်းမှ ယမန်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ […]
လူမြင်ကွင်းမှာ ဗိုက်လှန်တတ်သူတွေကို အရေးယူမယ့်တရုတ်၊ နိုင်ငံကြီးသား မပီသလို့ဟုဆို
လူမြင်ကွင်းမှာ ဗိုက်လှန်တတ်သူတွေကို အရေးယူမယ့်တရုတ်၊ နိုင်ငံကြီးသား မပီသလို့ဟုဆို တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြင်ရတွေ့ရများလေ့ရှိတဲ့ ဗိုက်လှန်ပြီးနေတတ်တဲ့ အလေ့အထကို တရုတ်အစိုးရက တားမြစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဆို ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး မြင်ရလေ့ရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့် အဝလွန်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ဗိုက်လှန်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိကြသူတွေပါ။ ဒီလို အပြုအမူလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ မြို့ကြီးသား၊ […]
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး နေရာကွက််မိုးကြီးမည်် လှိုင်းကြီးမည် ရေဘေးအန္တရာယ်် သတိထားပါ
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အများစုတွင် နေရာကွက်မိုးကြီးမည်် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အား အသင့့်အတင့်မှ အားကောင်း‌နေပြီး ယနေ့ညနေအထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အများစုတွင် နေရာကွက်မိုးကြီးမည်ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း်တွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင််းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု နေပြည်တော်သမီးလေးအမှု.ထက် အဆ ပေါင်းများစွာဆိုးဝါးရက်စက်တဲ. မင်္ဂလာဒုံက သက်ငယ်မုဒိမ်းကျင်.ခံရပြီးရက်စက်စွာအသတ်ခံရတဲ.သမီးငယ် မဇာခြည်ဖြိုး အသက် ၅ နှစ်ပါ၊၊ အခု ၆ လကျော်ကြာမြင်.လာသည်.တိုင် တရားခံမပေါ်သေးပါ၊၊ ပြည်သူတွေက သိ ပြည်သူတွေက အော်မှ အလုပ်ထလုပ်ကြတဲ. ရဲတွေရှိတဲ. ဒီနိုင်ငံမှာ သမီးလေးအမှု.ကတော့ လူမသိ […]